साउन २८, सिन्धुली । गरे के हुन्न ? भन्ने प्रश्न आजभोलि निक्कै सुनिन्छ । हुन पनि हो, मिहिनेत गर्ने हो भने पक्कै उपलब्धि हासिल हुन्छ । यो शास्वत नियम नै हो । केही वर्ष अगाडीसम्म मरुभुमि जस्तो देखिने सिन्धुलीको महाभारत र चुरे क्षेत्रका सुक्खा वन क्षेत्र यतिवेला हरियाली छन् । हरियाली आफैं बनेको भने ह...
खोलियो भ्यू टावर–थामी संग्रहालय हाइकिङ ट्रयाक
दोलखा । भीमेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १ मा निर्माणाधीन थामी राष्ट्रिय संग्रहालय तथा वडा नं. ६ स्थित भ्यू टावर जोड्ने ‘हाइकिङ रूट’को ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा नगरपालिकाको रू. १५ लाख अनुदानमा उक्त ट्रयाक खोल्ने तथा केही भागमा सिँढी निर्माण गर्ने काम सम्पन्न...
उद्योगमन्त्री नेपालले जारी गरे ४५ बुँदे निर्देशन, भ्रष्टाचार शून्य बनाउने अभियान थालियो
साउन २७, हेटौंडा । प्रदेश–३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय र कर्मचारीलाई ४५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्री अरुणप्रसाद नेपालको सक्रियतामा मन्त्रालयले...
साउन २७, बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका कार्यालय अगाडि कपडा बैंक स्थापना गरिएको छ । बनेपा नगरपालिका–८ का स्थानीय बासिन्दा सर्वश्री अधिकारीको सक्रियतामा शनिवारबाट कपडा बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बैंकले दिनदुःखीका लागि निःशुल्करुपमा कपडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । असहाय तथ...
चितवन । चितवनमा पछिल्लो समय ल्यान्डलाइन फोनका सेवाग्राही घट्दै गएका छन् । जिल्लामा १ दशक अघिसम्म ल्यान्डलाइन फोनका प्रयोगकर्ता बढी थिए । त्यसपछि मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेसँगै ल्यान्डलाइन फोन लिनेहरू घटेको हो । पीएसटीएन र एडीएसएलका लागि छुट्टाछुट्टै महशुल बुझाउनुपर्ने हुँदा ल्यान्डलाइनतर्फ आकर्षण घटे...
नवराज शिवाकोटी दोलखा । गाई आनुवंशिक स्रोतकेन्द्र, जिरीबाट दैनिक ३ सय लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । केन्द्रमा रहेका ४० ओटा दुहुना गाईबाट दैनिक उक्त परिमाणमा दूध उत्पादन हुने गरेको हो । उत्पादित दूध प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँ १५ पैसामा विक्री भइरहेको केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शंकर शाहले बताए ।&...
मुख्य बजारलाई चिरेर राजमार्ग बनाउनु हुँदैन, हेटौंडालाई राजधानीका रुपमा टिकाउन बल गरिरहेको छु : मुख्यमन्त्री
साउन २६, हेटौंडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडकको दायाँ–बायाँ १६/१६ मिटर मात्र भत्काएर सडक विस्तार गरिनुपर्ने बताएका छन् । वैकल्पिक मार्गको बोलपत्र आह्वान भइसकेकाले मुख्य बजारलाई चिरेर राजमार्ग बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।...
दीर्घकालीन समस्यामा क्रसर उद्योग
हेटौंडा । मकवानपुरको सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ मंसिरमा प्रदेश–३ सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि बनाएर मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग ३ महीनाभित्र स्थानान्तरण वा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो । गत च...
त्रिशूली दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ८ पुग्यो, २० भन्दा बढी अझै बेपत्ता
साउन २५, धादिङ । बेनीघाटरोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटमा भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुगेको छ । मृतकमध्ये दुई जनाको मात्र सनाखत भएको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एक महिला, एक बालिका र चार पुरुषको सनाखत हुन सकेको छैन । शुक्रवार बिहान सर्लाहीको मलंगवाबाट काठमाडौंतर्फ आउँ...
प्रदेश ३ मा ‘स्कूल बस’ सञ्चालन गर्ने तयारी
साउन २५, हेटौंडा । घण्टौं हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी प्रदेश नं ३ सरकारले ‘स्कूल बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्कूल बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा रू.२ करोड ५० लाख...